Recipes Cooking waa degel ka mid ah Actualidad Blog. Websaydhkeenu wuxuu u heellan yahay dunida ee gastronomy, dhexdeedana waxaan ku soo jeedinaynaa fikradaha suxuunta asalka ah inta aan ka hadlayno wax kasta oo la xiriira cunto karinta iyo cuntada.
El Kooxda tifaftirka ee Cunto karinta Waxay ka kooban tahay cunnada macaan ku faraxsanahay inaan kula wadaago khibradooda iyo xirfadahooda. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto, ha ka waaban noogu soo qor foomkan.
Cunto karinta waxay ka mid ahayd waxyaabaha aan xiiseeyo ilaa caruurnimadaydii waxaanan u adeegi jiray dameerka hooyaday. In kasta oo aysan wax yar ku lahayn xirfadeyda hadda, karinta ayaa sii wadda inay i siiso daqiiqado aad u wanaagsan. Waxaan jeclahay aqrinta baloogyada wax lagu kariyo ee heer qaran iyo heer caalami ah, la socoshada qoraallada ugu dambeeyay iyo la wadaagga qoyskeyga iyo hadda adiga, tijaabooyinkeyga culus
Waan jeclahay cunto karinta, waa mid ka mid ah hiwaayadeyda, taasi waa sababta aan u bilaabay bogeygeyga, Cooking with Montse, kaas oo aan kula wadaago cuntooyinka nolol maalmeedka qaab fudud oo fudud oo aan ugu raaxeysto.
Aniga oo ah qof jecel cuntada wanaagsan, waxaan ku dhawaaqayaa inaan ahay qof jecel guud ahaan karinta. Xulashada alaabada iyo dhadhanka dhadhanka, waxaan ka helayaa xilligeyga hal-abuur maalinle ah. Halkan waxaan kula wadaagayaa cuntooyinka iyo cuntooyinka aan ugu jeclahay, isku-darka cunnooyinka dhaqameed iyo kuwa caalamiga ah.
Waxaan jeclaa cunto karinta ilaa caruurnimadaydii, waqtigan xaadirka ah waxaan u heelan ahay samaynta cuntadeyda iyo hagaajinta wax kasta oo aan bartay sanadihii la soo dhaafay, waxaan rajaynayaa inaad jeceshahay cuntooyinkeyga sida aan jeclahay inaan kula wadaago.
Maskaxdayda had iyo jeer furfuran ee ku talo jirta in aan wax abuuro ayaa hadda igu hoggaamisay adduunka jikada. Waxaan rajaynayaa inaad jeceshahay cuntooyinkeyga oo aad dhaqan geliso. Way macaan yihiin!
Waa mid ka mid ah wadaadada cunto kariska gaabiska ah iyo biirka loo yaqaan 'Guinness beer', waxaan diyaarinayay cuntooyinka farta lagu leefleefiyo muddo dheer. Dhaqan, casri ah, waan ku dhiiran karaa inaan wax sameeyo! Tijaabinta iyo isku dayga dhadhanka cusub, waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay cuntooyinkeyga sida aan u sameeyo.